Caamsaa 06/2018 Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Ada’aa Bargaatti jiraattotnifi hojjattotni Warshaa Simintoo DANGOTE komii guddaa dhiyeeffachaa jiru! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsCaamsaa 06/2018 Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Ada’aa Bargaatti jiraattotnifi hojjattotni Warshaa Simintoo DANGOTE komii guddaa dhiyeeffachaa jiru!
1. Dhimma beenyaa lafa ummataa
Innis kanaan duraa beenyaan lafa jiraattotaa Gandaa Reejjii Muk_Odaa iddoo dhagaa ‘lime stone’ jedhamu sun tilmaama sirrii waan hin turiinif jiraatootni dhaabbaticha erga himataniin boodaa seeraan qarshii miliyona 43 murteeffamefii ture. Haatahu malee, namootni maqaan isaanii asii gaditti heeraman gaafa Caamsaa 06/2018 Amboo deemanii Abbaa Murtii qunnamudhaan murtoo ummataaf kenname kana jijjiirsisuuf yaalanii turan.
1. Obbo Bultoo Caalaa (Human Resourse Management)
2. Taarikuu Yoonaas ( Hojiin isaa ummataafi dhaabbaticha walitti fiduu)dha.
Jarreen ku Ambootti Abbaa Seeraatif gubboo kennuudhaan akka murtichi geeddaramu gaafataa turan. Haatahu malee, murtichi geeddaramuufi dhiisuu ammatti adda hinbaane. Namootni kuni warreen kanaan duras Aangawoota Lammiilee Hindii dawoo godhachuudhaan Hojjattoota Warshaa DANGOTE irratti shiraa hamaa xaxaa turani.
2. Bara darbe dargaggoota eebbifamtoota dhalataa naannoo sanaa kan ta’an injinaroota 16 qarshii 2500niin kontiraata waggaa tokkoo jedhani qacarani turan. Innis carraa duraa isiintu argata jedhanii qarshii kanaan mooksani mallatteessiisanii turan. Isas kan mallatteessise namicha Taarikuu jedhamu kana ture. Garuu ijoollee kanneeniif nama tokkoofillee carraa qacarrii dhaabbataa osoo hinkenniniif nama iddoo biraa irraa fidanii qacani. Sababa nama iddoo biraarraa fidee qacarsiiseef namichi Taarikuu jedhamu kuni hojjattoota kontiraataan turan kanneen yeroo keessan fixattan jechuun hojiirraa ariisisee jira.
3. Ijiolleen hojii dhabeyyii ta’an hojii konkolaataa dhiquu irratti mooraa DANGOTE fulduratti karaa seeraan gurmaa’anii turan. Gaafa 05/2018 deeggarsa dhaabbaticha gaafachuuf biiroo Taarikuu yeroo seenan ijoollee kana isin hinkeessummeessu jechuudhaan shugguxii itti fudhatee doorsisuudhaan mooradhaa baasee.
Rakkoolee kanneenifi kan biroo achi keessatti muudatan kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa laatuu qaba jechuun Qeerroon naannichaa dhaammatee jira.
Namoota Hedduu: Waxabajji 3/2018 Dhimma ajjeechaa hojji geggeessa warshaa simiintoo DANGOTE mr. – https://t.co/z8DsO6DZ9i pic.twitter.com/miUrYa4PUy